Kedu ụdị ngwá ọrụ na-ekiri elekere ga-enyere m aka ịmepụta profaịlụ dị mma nke njikọta weebụ?
Ọfọn, a na-akpọkarị backlinks ndị dị mma maka uru ha na-eme ka ị nweta ahụmịhe nchọgharị na-eme nchọgharị na onye ọ bụla site na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla ma ọ bụ blog.Maka njikọ nke ụlọ, ịhazi usoro ha nke ọma ga-enyere ndị ezigbo ọbịa aka ịbanye n'ime mpaghara ọ bụla ọdịnaya dị jụụ. Enweghị ihe ọ bụla ị ga-ekwu na ọ bụ onye ọ bụla bịara ileta nleta ọhụụ karị, ka a na-ewerekwu omume na nkezi, na ikike ndị ọzọ bụ isi (dị ka Google n'onwe ya, yana Yahoo na Bing). N'ezie, backlinks so n'ime ndị na-achịkwa n'elu ebe obibi nke SEO ugbu a. Ya mere, ntanetị njikọ weebụ gị kwesịrị iji nyochaa ma ọ dịkarịa ala na ngwaọrụ eji eme ihe ngosi-azụ azụ, nke ọ bụ na-eji ya eme ihe, ọ bụghị ya?
Gbanwee Mgbidi Njikọ n'ime Usoro Nchịkwa Control
Ma olee otu esi nweta ọkwa kachasị elu na SERPs Google? Kedu otu esi eme ka azụlinks dị mma? Kedu ihe ị ga - eme mgbe ihe na - adịghị mma? Ma olee nke bụ ihe nkwụsị kachasị njọ, ọ ga-eme otú ahụ? Na kedu ihe mere ị ga - eji gbaa mbọ nyochaa azụzụ azụ azụ? Ọfọn, nke ahụ bụ mgbe ntụrụndụ amalite - na ọbịbịa na-abata nhọrọ dị iche iche dị iche iche nke ndị na-elele anya azụlink. Ee, ha nwere ike inyere gị aka ịmepụta ihe ntanetị dị mma nke njikọta weebụ - mietwohnung suche tipps. Kedu ụdị onye nlere azụlink ị kwesịrị ịchọrọ maka onye inyeaka n'elu gị? Ka anyị malite ịbanye!
3 Ụzọ Ebube Na-aga "Profaịlụ Njikọ"
Tupu anyị amalite, ka anyị jide n'aka na anyị na-agbaso usoro usoro njikọ atọ ndị a iji mee ka "ezigbo" profaịlụ nke njikọta weebụ. - ọ dịghị ihe ọ bụla na-ekiri ihe na backlink ma ọ bụ ihe nyocha ọ bụla ọzọ nwere ike inyere aka na mmalite. Ọ bụ ya mere ma ọ bụghị na-eme ihe kacha mma iji zere Black-Hat SEO dịka ọnyá ahụ, a na-atụ aro ka itinye uche gị na ihe ndị a:
Cheta na ọdịnaya dị mgbe eze, njikarịcha nyocha nke saịtị. Ọ pụtara na ị kwesịrị ị na-agbasochi ọdịnaya dị mma nke na-anapụta uru - nke mbụ.
Ntọala redlink ọhụrụ na-adị ndụ naanị mgbe nkwenye ziri ezi na nyocha nke ọma.
Zere ịzụ ahịa ma ọ bụ jiri mgbanwe backlinks gbanwere na ọnụahịa niile, ma tinyekwala maka PBN (netwọk mgbasa ozi nzuzo).
Ndi Ama Ọfiọk Kpukpru emi?
Ihe nwere ike ijuanya na ọtụtụ ndị nwe ụlọ na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ bụ na ọ bụghị njikọ niile ejikọtara ya na okike. Ị ma na ị na-ewu ha maka ezi nzube? A sị ka e kwuwe, ọ ga-abụ na profaịlụ weebụ gị ugbu a nwere ike izute ihe ndị dị mma na SEO? Ka anyị mee ihe dị iche - ihe a bụ na ụfọdụ backlinks na-echere iji nweta ezigbo uru na uru zuru ezu na SEO. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ anaghị enwe ezigbo ihe ọ bụla, ndị isi engines na-achọpụta ya dị ka ndị na-enweghị isi. Kedu ihe ọzọ - ebe a anyị na-abanye nkwụsịtụ siri ike - n'eziokwu, backlinks nwere ike ọfụma ọbụna, ọbụna ma ọ bụrụ na ejiri ihe ahụ na-ekwesịghị ekwesị weere akaụntụ maka ogologo oge ahụ.
Nri ọ bụla nwere ihe dị iche iche
Na-etinye ya n'asụsụ Bekee a na-asụ, njikọ dịgasị iche iche dị iche iche iji bịa na ntanetị dị iche iche - nke ahụ bụ na ọ bụghị njikọ ọ bụla na-ebufe (ma ọ bụ na-ezube ịgafe) site na ọnụ ụzọ azụ azụ na SEO. M na-ekwu na igodo nkwado maka njikarịcha ọchụchọ bụ PageRank (a. k. a. TrustRank) usoro nke metrics dị oke mkpa dị na 0 ruo 10. A na-anakwere ojiji nke isi okwu a iji tọghata ọ bụla ibe weebụ ọ dị mkpa, bụrụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi, na ikike iji mara mma akara nke ọma.
Ya mere, ka anyị kwupụta ya ọzọ - tupu ihe ọ bụla ọzọ, a ghaghị inweta profaịlụ njikọ weebụ "ezigbo" gị naanị site na ụdị backlinks dị mma. N'ihe banyere SEO, ọ pụtara na ị ga-ahapụ kpam kpam site na Redirect na Mba-Soro njikọ, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ zere iji ha eme ihe n'enweghị ezi uche.
Redirect njikọ na-anọchi anya ụdị njikọ dị iche iche na-adabere na redirect (nke e dere ede na PHP) - iji mee ka ị banye na ebe nrụọrụ weebụ a chọrọ site na ibe weebụ (n'otu ebe nrụọrụ weebụ ahụ ), kama ijikọ gị ozugbo na ihe a na-agbanye n'ọgba.
Njikọ na Nofollow
Ọ dịghị-eso njikọ na-agbakwunyere na Nofollow HTML attribute uru. Ụdị njikọ a dị nnọọ anya site n'echiche mbụ nke hyperlink haziri maka nzube SEO site na nkọwa. Ya mere, kama ịkụ nzọ na SEO, njikọ na Nofollow gosipụtara ozugbo na URL nke ebe nrụọrụ weebụ a na - aga - na - enweghị ikike ma ọ bụ nkwenye ntụkwasị obi ọ bụla.O doro anya na e mebere Ntube Na-esochi maka ihe kpatara ya - dịka ọmụmaatụ, ha na-eje ozi iji guzogide ụdị ụfọdụ nke spamdexing (ma ọ bụghị ya, iji gbochie spamdexing). A na-ejikwa ha ahapụ ọnụ ụzọ meghere maka ahụmahụ nchọgharị mmadụ naanị (i. e. , ha anaghị agafe njikọ-ihe ọṅụṅụ). Ya mere, n'iji No-Follow njikọ njikọ nwere ike ịbụ mkpebi dị mma, e. g. , karịsịa maka ndị na webmasters na ndị nwe saịtị na-ejikọ aka na ibe spam maka ihe ụfọdụ.
Nhọrọ uru dị mma
Nwee ihe niile dị na ya, ka anyị laghachi na isi nke mkparịta ụka anyị ugbu a - nke ngwa ngwa nyochaa azụ nwere ike ime ka ezigbo njikọta njikọ weebụ? Ọfọn, nke ahụ na-adabere. Naanị n'ihi na anwalela m ụdị ngwá ọrụ dị iche iche na-adịbeghị anya site na afọ na-adịbeghị anya - na njirimara ha niile dị iche iche, na enweghị ntụpọ na-adịghị ike abụọ. Mụ onwe m chọtara nhọrọ ndị a kachasị mma - Moz's Open Site Explorer (Moz), Semalt Analyzer (Semalt), Majestic SEO Toolkit, na Ahrefs Backlink Viewer / Checker Tool. N'ezie, ọ bụ naanị gị ka ị ga-esi kpebie - mana m na-agwa gị ka ị nwalee onye nke ọ bụla, ọ dịkarịa ala na nkenke. Rịba ama, na abịala m nchịkọta nhọrọ dị mma nke kachasị mma ndị na-elele anya azụlink na ịrụ ọrụ nyocha - ịtụle uru bara uru nke atụmatụ ha bara uru, ogo ahụmịhe ọrụ, nhazi nke nhọrọ nchịkwa, na ihe kachasị pụta, gụnyere ezi nghọta zuru oke.
Nọgidenụ Na-eyi Egwu Na-ejide
Maka nkwubi okwu, M ga-achọ ịmebata gị isi ihe ndị dị mkpa iji sụgharịa profaịlụ gị kachasị mma nke njikọta weebụ.M na-ekwu na tupu i jiri ihe ngosi ọhụụ backlink nke ọhụrụ gị na-emegharị ọhụrụ, ị ga-edozi idozi ugbua gị.Nwee mmalite dị ọcha - jiri Google Disavow Tool wepụ ihe ọ bụla nwere ike imebi usoro SEO gị, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ịdakarị àgwà profaịlụ backlink gị ruo n'ókè ụfọdụ. Na nkenke, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-eche naanị ihe ị na-enyo maka otu ebe nrụọrụ weebụ ị na - ejikọta - lezie anya iji kpochapụ nsogbu ọ bụla. Na-eme nke a, jiri ngwá ọrụ ahụ na-achọpụta "gwa" Google ka ị ghara ịtụle njikọ ndị a dị iche iche ị ka na-ejighị n'aka, ọ dịkarịa ala maka oge ahụ. N'ụzọ dị otú ahụ, ọtụtụ webmasters ọkachamara na-eji ngwá ọrụ a (kama ndị ọrụ ahụ na-elele azụlị mara mma) - nanị iji laghachi ma gbanwee, gbanwee, ma ọ bụ mee ngwa ngwa maka ihe ọ bụla SEO gara aga na ha ejidere maka ụfọdụ pụrụ iche echiche.